Mkpa Ọdịnaya dị na SEO: Ntuziaka Zuru Ezo Site na Semalt
Etu esi mepụta ọdịnaya nke kachasị maka ngwa ọchụchọ
Ọrụ nke Semalt
Ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ chọrọ ka edepụta ha na saịtị Google TOP 100. Ọtụtụ n'ime weebụsaịtị ndị a na-anwa ime ka ebe nrụọrụ ha dị mma maka ngwa ọchụchọ. Onu ogugu ole na ole n'ime ha gh otara idi nkpa nke ọdịnaya SEO.
N'ihe banyere ogo dị elu nke nyocha ọchụchọ, enwere ike iji ọdịnaya nke weebụsaịtị gị tụnyere injin nke ụgbọ ala gị. Cargbọ gị agaghị ebugharị inch na-enweghị injin, otú a ka ga-emekwa ka ebe nrụọrụ weebụ gị ghara ịga n'ihu n'ọ ogo na-enweghị ọdịnaya dị mma.
Mgbe ọdịnaya gị bara ezigbo uru ma na usoro SEO gị ndị ọzọ dị elunot, n'oge na-adịghị anya, ebe nrụọrụ weebụ gị ga-adị na ọkwa ọchụchọ engine. Ntughari bu ikpe ma oburu na ọdịnaya gi na atumatu SEO adighi nma - ha puru idabaa ntaramahụhụ sitere na Google. Ozugbo webụsaịtị Google nwetara ntaramahụhụ Google, ọ na - esiri ha ike ọfụma ịgbake na ya.
Semalt chọrọ inyere gị aka ịghọta uru ọdịnaya dị na SEO, ihe ọdịnaya bụ n'ezie, otu esi emepụta ọdịnaya kachasị mma na ihe niile ị ga - eme iji jide n'aka na ọdịnaya gị na atụmatụ SEO na-arụ ọrụ aka iji nye gị ntụpọ na elu ọchụchọ. nyocha nke injin.
Ka anyị nyochaa ụwa nke ọdịnaya na SEO.
Gịnị Bụ Afọ Ojuju?
N ’ọkwa dị larịị, ihe dị n’ime bụ naanị ozi dijitalụ (ederede, onyonyo, vidiyo, ihe ọ bụla) na ebe nrụọrụ weebụ gị iji mee ka ị nweta ihe ọmụma, mee gị obi ụtọ ma ọ bụ mee ka ndị ọbịa mara.
Kedu otu o siri dị mkpa na ọdịnaya SEO?
A na-eme nyocha ọchụchọ karịrị ijeri 3.5 kwa ụbọchị na Google. Na mbọ iji mee ka ndị ọrụ ha, Google na-eme ka ọzigharị algọridim ya iji hụ na ha nyefere “nsonaazụ bara uru ma bara uru” na obere oge ga-ekwe omume
Nsonaazụ bara uru ma dị mkpa na amaokwu a bụ ọdịnaya nke weebụsaịtị niile na ịntanetị. A na-edoziri ha n'usoro onye bara uru ma dị mkpa nye onye ọrụ ahụ na-eme ọchụchọ ahụ.
Nke a na-egosi na onye ọrụ ga-ahụrịrị ka Google wepụtara onye ọrụ tupu ya edozie ya.
Iji bulie ike nke uru SEO dị na ọdịnaya gị, enwere ụfọdụ njirimara ọdịnaya gị kwesịrị ịnwe. Ha gụnyere:
1. Ọ kwesịrị ịba uru ma bụrụ ihe ọmụma: Ọ bụrụ na ịnwe webụsaịtị maka azụmahịa gị, ịkwesịrị ịgụnye ọnọdụ, kọntaktị kọntaktị, ngwaahịa / ọrụ enyere, na awa ọrụ. Ọ bụrụ na ị ga - emeli ya, tinye blog iji mee ka ndị ahịa gị nwee mmelite na akụkọ ọhụụ.
2. Ọ kwesịrị ịba uru karịa bara uru karịa weebụsaịtị ndị ọzọ na otu niche: Ọ bụrụ na ị dee gbasara enyemaka onwe gị, dịka ọmụmaatụ, gbaa mbọ hụ na isiokwu gị na-enye ozi ka mma ma ọ bụ echiche dị iche banyere enyemaka onwe karịa ọtụtụ iri puku Edemede na-atụgharị kwa ụbọchị n'otu isiokwu.
3. Okwesiri ikwenye ekwenye: Enwere ike ikwenye ntụkwasị obi nke saịtị gị ma ọ bụrụ na i jiri nyocha mbụ, nkọwapụta, na njikọ maka ọdịnaya saịtị gị. Onye na - ede akwụkwọ ndụ, nyocha, na akaebe sitere n'aka ndị ahịa dị adị ga - eme ka ntụkwasị obi gị sie ike.
4. O kwesiri ibu nke di elu: Gbaa mbọ hụ na ọdịnaya dị na saịtị gị bụ ihe pụrụ iche, kwụ ọtọ ruo n'ókè na nke topnotch quality. Zere plagiarism ọ bụla.
5. Ọ kwesịrị itinye aka: Weta ebe nrụọrụ weebụ gị na ndụ site na ịtinye onyonyo na vidiyo dị mma. Ekwela ka uche gi dọpụ uche ndị ọbịa gị. Zere ọtụtụ mgbasa ozi kwa. Mee ka ndị ọbịa gị tinye aka site na ị na-emelite ha mgbe niile. I nwekwara ike idowe ha na saịtị gị ogologo oge site na igbe nzaghachi na / ma ọ bụ wijetị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ.
Etu ị ga - esi mepụta ọdịnaya nke kachasị maka ihe ịchọrọ
Iji mepụta ọdịnaya kachasị, enwere usoro ole na ole ị ga-agbaso.
Tupu ịmepụta ọdịnaya ahụ
1. Mee nnyocha nyocha: maka nsonaazụ kachasị mma, ị ga - achọ ịchọpụta ihe isiokwu gị na - achọkarị site n'aka ndị na - ege gị ntị. Akụrụngwa nyocha nke isiokwu ntụkwasị obi dị ukwuu dị ka nke Semalt na-enye ga-enwe nnukwu uru ime nke a.
2. Họrọ isiokwu gị na okwu ndị na-akwado ya: Ọ dị mkpa ka i buru ụzọ nyocha isiokwu gị ka enwere ike ịchọta ọdịnaya nke nsonaazụ gị na ngwa ọchụchọ. Site na nyocha gị, chọpụta isiokwu dabara adaba maka ọdịnaya gị. Gbaa mbọ hụ na itinye uche na isi okwu dị ogologo. Ọzọkwa, zere mkpụrụokwu asọmpi na oke ọnụ ọgụgụ ọchụchọ.
3. Nwee usoro gị na usoro ọdịnaya maka ịgụpụta ihe dị mfe: Ọtụtụ saịtị na-alụ ọgụ maka nlebara onye ọbịa ọ bụla ị nwere na weebụsaịtị gị. Yabụ ị ga-eme ike gị niile ka ha mee ka ihe ha metụtara ghara ịka mma. Otu ụzọ isi mee nke a bụ site na ịhazi ọdịnaya gị maka ọgụgụ dị mfe.
N'okpuru ebe a, ndụmọdụ ụfọdụ nwere ike ịbara gị uru:
a . Tiwaa ihe gi n’ime obere oyuyo. Paragraf buru ibu na-emenye ọtụtụ ndị ọbịa pụọ. Ọ kachasị mma iji ahịrịokwu 2-3 na paragraf ọ bụla.
b . Ka o kwere mee, tinye obere edemede na / ma obu ihe onyonyo mgbe o bula okwu abuo nke 200-300 ka iwepu ọdịnaya gi.
4. Fanye njikọ azụlinks na ọdịnaya gị: Ka ndị ọzọ na-ekwenye ntụkwasị obi maka saịtị gị, ọ dị elu karịa. Mgbe ị jikọtara okwu ụfọdụ na weebụsaịtị dị mkpa ma nwee ikike, ndị ọrụ ọchụchọ na-ewere ọdịnaya gị ikwenye ekwenye. Maka nsonaazụ kacha mma, belata okwu ndị dị na njikọ gị na 6 ma ọ bụ obere.
5. Nọgidesie ike na isiokwu gị na isi okwu ịchọrọ : ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ọdịnaya kachasị baa uru ma baa uru na isiokwu gị, ọ dị oke mkpa na ị rapara na isiokwu gị. Ọzọkwa anwala nwaa ọtụtụ mkpụrụokwu. Gbaa mbọ hụ na itinye uche na isi okwu gị na okwu ndị na-akwado ya.
Mgbe emechara ọdịnaya gị
1. Mee ka URL gị dị elu: Ọ bụ adreesị nke webpage gị etinye ozugbo na elu nsonaazụ ọchụchọ. Iszọ esi ahazi URL gị nwere ike ikpebi ntinye ọnụego gị. Ọ bụrụ na URL gị toro oke ma ọ bụ dị ka ihe omimi, ọ nwere ike menye ndị na - achọ ọchụchọ aka ịpị na weebụsaịtị gị. Ọ dị mkpa ka agụọ URL gị ka ọnụọgụ ọnụọgụ-na-emetụta oke gị.
2. Nwee mkpado aha gị: Mkpado isiokwu bụ akara nke a na-ahụ anya nke dị n'okpuru URL. Qualitydị mma nke akara aha gị nwere ike ime ka onye ọrụ chọọ pịa saịtị gị ma ọ bụ ileghara ya anya. Mkpado aha ntanetị na-enyekwara aka injin nchọta ịghọta ihe ihe websaịtị gị gbasara.
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ga - enyere gị aka bulie akara aha gị:
a. Kwe ka aha ntinye aha kwue n’ezie ihe isiokwu nke ibe ya dị.
b. Mkpado aha kwesiri ịbụ 60 odide ma ọ bụ obere.
c. Debe akara igodo ebumnuche gị na mbido.
d. Gbalịa ka ị ghara itinye ọtụtụ isi okwu na aha.
3. Kwalite nkọwa meta gị: Nkọwa meta bụ obere mkpirisi ederede na ibe gị nke na-egosi n'okpuru URL na akara aha. Obere ọdịnaya a na-ahụ na nkọwa meta gị metụtakwara usoro ịpị-aka gị ka ihe ndị ọrụ na-ahụ ebe ahụ ga-ekpebi ma ha ga-pịa saịtị gị ka ọ ga-aga n'ihu. Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ga - enyere gị aka bulite nkọwa meta gị:
a. Gbaa mbọ hụ na nkọwa nke meta bụ mkpụmkpụ na nkọwapụta nke ihe ndị dị mkpa.
b. Gbaa mbọ hụ na nkọwa meta ahụ pere ihe odide 160.
c. Debe mkpụrụokwu dị mkpa na nkọwa nke meta (a ga-eme ka ha pụta na nsonaazụ ọchụchọ).
Kedu ka Semalt nwere ike isi nye aka
Ihe ndị a nwere ike ịdị ụzụ zuru oke ma nwee ike ịdị ka nnukwu ọrụ. Nke a bụ ihe mere Semalt emepụtara atụmatụ nkwalite akpaghị aka maka azụmahịa gị. Ihe dị mkpa maka imepụta ọdịnaya buru ibu na mbụ bụ iji bulie ogo gị na ngwa nchọta nke ga-eduga na ọganiihu maka azụmahịa gị.
Semalt na-ewepụ nchegbu ahụ ma mee ka azụmahịa gị n'ịntanetị nwee ihe ịga nke ọma.
Ha na-enye ngwaahịa na ọrụ dị ịtụnanya iji hụ na ibe weebụ gị nwere oke ọfụma. Ndị a gụnyere:
1. AutoSEO: Semalt's AutoSEO na-ekwe nkwa nsonaazụ dị ukwuu n'ime obere oge. Ihe ngwungwu SEO a na-enye: mmezi visibiliti ndozi; ihu akwụkwọ; njikọ njikọ; nyocha isiokwu; na akụkọ nyocha weebụ. Pịa ebe a ka ibido.
2. SEO zuru ezu: Nke a gụnyere usoro SEO dị elu nke edepụtara maka nsonaazụ kachasị mma. Semalt zuru SEO na-enyefe: njikarịcha n'ime; idozi nsogbu nke mkpokọta; odide ọdịnaya; ịkpata njikọta; na-akwado ma na-agba izu. Were uru Semalt zuru SEO ebe a .
3. Nchịkọta weebụ: Ngwaọrụ nchịkọta ihe ntanetị Semalt na-ekpughe ụzọ dị mkpụmkpụ nye Google TOP10. Ngwá ọrụ ndị a na-enyere aka ịlele ọkwa weebụ gị; kpughee visibiliti nke saịtị gị na ịntanetị; nyochaa ebe nrụọrụ weebụ na-asọmpi; mata mmehie njiri na peeji; ma zitere gị akụkọ zuru oke nke weebụ. You nwere ike ịnweta akụkọ nyocha nke onwe gị ugbu a.
4. Nzụlite ntanetị: Nmalite izizi dị mkpa na ntanetị yana maka ọnọdụ ndụ. Onyinyo na-adọrọ adọrọ na-enyere aka inweta ndị ahịa na-atụ anya. Semalt na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ gị mara mma nke ukwuu ma nwee mmekọrịta dị mma maka ndị ahịa gị. Ndị mmepe weebụ ọkachamara nke Semalt na-enye: atụmatụ weebụ mara mma ma na-arụ ọrụ; usoro njikwa ọdịnaya; nhụbaanya na-abawanye; ntinye akụrụngwa dị mma na API; Boozụ ahịa na e-commerce; nkwado na mmezi.
5. Mmepụta vidiyo: Ndị na -enyere ndị ahịa ha aka na-ewepụta ọdịnaya ederede edere edekọ, Semalt na-emekwa ọdịnaya vidiyo dị egwu iji mee ka ị nọrọ n'ihu asọmpi ahụ.
Ọdịnaya bụ eze n’ime nchọta nchọcha. Ọdịnaya gị nwere ikike ime ka azụmahịa gị ma ọ bụ mebie ya. Site na nghọta a chịkọtara ebe a, ị nwere ike ime nke ọma ịmepụta ọdịnaya na-etinye aka ma ọ bụ ka ọ ka mma, hapụ ya n'aka ndị kacha mma na azụmaahịa SEO - Semalt.